World Network Tourism panel gụnyere HE Sheikha Mai
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » World Network Tourism panel gụnyere HE Sheikha Mai
Inweta njem nleta • Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • investments • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ternyaahụ na Network Njem Nleta Ụwa akpọ òkù Onye nwe obodo Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, Bahrain ya elu-elu egbe igba egbe. Ọ bụrụ na a hoputara ya ịbụ onye odeakwụkwọ ukwu maka ọzọ UNWTO, ọ ga - abụ nwanyị izizi maka ọkwa a. Ọ ga-esonyere Gloria Guevaras CEO nke WTTC ma nọọ dị ka nwanyị kachasị ike na njem nlegharị anya.
Ọtụtụ iri afọ ọ rụzuru na Cultural Tourism na obodo ya Bahrain na Arab ụwa ama ama. Ọ na-egosi na ọ dị umeala n'obi ma dịkwa jụụ, mana mgbe ọ na-ele anya ọzọ, ọ pụtawo dị ka ọtụtụ ndị na-akpọ ya onye na-adịghị ekwu okwu ma na-arụ ọrụ dị egwu.
Onye ndụmọdụ ya kachasị nso, onye garakwa na WTN Session bụ Prof. egburu Aziz. Ọ nwere akara ugo mmụta PhD na njem mmụta banyere njem nlegharị anya na (1999) yana nzere Masters (1992), ọ rụrụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ, onye amụma amụma na agụmakwụkwọ na UK, Dubai na Bahrain. Ọchịchọ ya maka njem nlegharị anya pụtara ìhè mgbe ọ zara ajụjụ.
Onye isi ya nwere ike ige ntị, ọ na-emeghe maka ntụnye, ọ chọrọ mmekọrịta miri emi na ndị niile metụtara ya, ma ghọta nnukwu nsogbu ụwa nke njem na-eche. Nke ka mkpa bụ na ọ ghọtara ọkwa nke Secretary General agaghị enye ya n'ihi ndọrọndọrọ ọchịchị.
Nkwurịta okwu na nhazi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, gọọmentị, na ndị isi ụlọ ọrụ nzuzo dị mkpa, na ụwa nke njem nleta ga-eji otu olu kwuo okwu.
Mai kwuru na “Ego ndị otu ekwesịghị ịbụ ihe na-eme ka ndị steeti sonye na UNWO. Lọ ọrụ na-esonyere UN kwesịrị ịhapụ ndị nkwado nkeonwe. ”,
Nchegbu ya abụghị etu esi merie ntuli aka ahụ, kama otu ọ ga-esi nye aka n'ụzọ dị irè. Nchegbu ya bụ ọtụtụ nde ndị were n'ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ a zuru ụwa ọnụ.
Mai mejupụtara: “Mba chọrọ itinye ego, itinye akụ na ụba njem nleta, dị ka ọtụtụ mba agwaetiti, ọkachasị n'Africa chọrọ nkwado. Anyị dịka mba agwaetiti ghọtara nke a na Bahrain. ”
Alain St. Ange, onye bụbu minista njem nleta na Seychelles mere ka echiche nke UNWTO satellite office na Africa. Cuthbert Ncube, oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa na-ahụ onye isi ya dịka onye ode akwụkwọ na-arụ ọrụ ma nwekwuo nghọta. Ya onwe ya abụrụla isi nke ndị otu jikọrọ aka na UNWTO ọtụtụ afọ.
Ncube gbakwunyere nchegbu ya bụ na UNWTO n'okpuru ndị isi ugbu a anaghị arụ ọrụ nke ọma dịka onye nlekọta nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa. O kwuputara nchegbu ya maka usoro ntuli aka nwere ike imejọ ma zoo aka na leta mmeghe nke onye bụbu onye isi UNWTO abụọ gụnyere Dr. Taleb Rifai (onye isi oche nke WTN). Ọkammụta Geoffrey Lipman bụ osote odeakwụkwọ ukwu na onye otu ndị nnọchi anya World Tourism Network kwuru nke a gbasara nchegbu dị n'akwụkwọ ozi a. Mgbe nnọkọ ahụ, Louis D'Amore, onye guzobere Institutelọ Ọrụ Mba Nile Maka Udo Site na njem na kwa onye Board of WTN tinyekwara leta ya.
Sheikha Mai ekwughi okwu banyere usoro ntuli aka mana o kwuru na ya enwebela atụmatụ iji kwado onwe ya maka ọrụ a siri ike.
Ntinye ego, ọrụ, agụmakwụkwọ, ọzụzụ, njem enyi na ihu igwe, ọzụzụ, ịha nhata na njem nleta bụ ihe niile Onye isi obodo ya nwere ike inwe.
Ọ gwara ndị otu WTN ka a kpọtụrụ ha, n'ihi ya, ọ nwere ike ịmara ma mụta maka atụmatụ na ọrụ dị ịrịba ama. Ọ ghọtara na ya na ndị otu na-arụ ọrụ dịka WTTC, WTN na ndị ọzọ ga-eweta ọrụ njem na njem njem ọnụ.
A tụlere ụgbọ elu, Mgbanwe ihu igwe, ọ ga-abụ isiokwu nke ogwepụta WTN na-abịa n'ihu. A ndepụta nke na-abịa ihe pụrụ ịchọta na www.etn.travel/expo
World Networkism Network bụ onye na-akwado maka ọdịmma nke ndị njem na ndị obere njem metụtara ụwa.
World Tourism Network bụ Hawaii, netwọkụ dabere na United States nke ndị metụtara njem nlegharị anya n'ihe karịrị mba 120 na-elekwasị anya na ịkwado obere azụmaahịa njem na obere. Ozi ndi ozo banyere www.wtn.travel